Mba hahafeno ny fepetra ara-teknikan'ny mpanjifany mandritra ny fiasan'ny milina lehibe, ny workpiece dia tokony hapetraka amina toerana tsara amin'ny toeran'ny milina mandritra ny fampiasana. Mba hisorohana ny workpiece mandritra ny fizotran'ny milina. Rehefa afec ny famindran-toerana ...
Alohan'ny fametahana ny marimaritra iraisana amin'ny faritra dia ilaina ny mahatakatra tsara ny fahalalana mifandraika amin'ny famolavolana mazava tsara ao amin'ny Shenzhen. Avy eo, inona avy ireo teboka ara-teknika amin'ny milina marina? 1. Manatsotra ny fanamboarana sy ny fikojakojana ny masinina, ny fitsitsiana ny asa, ny fanapahana mekanika ary ny proce ...
Araka ny fantatsika rehetra, ny antony mahatonga ny fanodinana ireo faritra marim-pototra dia antsoina hoe milina mazava tsara satria ny fomba fanodinana sy ny fepetra takiana dia avo dia avo, ary ny fepetra takiana amin'ny vokatra dia avo dia avo, ary ny fizotran'ny fanodinana ireo ampahany marim-pototra dia misy. ..
Ny fanodinana mekanika dia sokajy fahita mahazatra sy feno. Ny fanodinana mekanika resahina eto dia miresaka manokana amin'ny fomba fanodinana ampiasaina amin'ny fitsaboana ny vokatra amboniny. Misy ny ampahany mifanindry amin'ny fanodinana mekanika ao amin'ny "Forming P ...
Ny fanodinam-by vy amin'ny akorany dia manondro ny fanodinana takelaka matevina kokoa an'ny miaramila, ary mety hanana anjara toerana lehibe amin'ity dingana ity izy. Satria ny faritra namboarina manokana dia efa za-draharaha, ka amin'ny sehatra iray manontolo dia nahasarika olona maro kokoa ...
Ahoana ny fomba fanatsarana ny fanodinana vy amin'ny akorany sy ny antsipiriany tokony hojerena
Betsaka ny fizotran'ny fanodinana vy amin'ny akorany. Ao anatin'ny dingan'ny fanaovana azy dia tokony ho hitanao tsara ny pitsopitsony amin'ny lafiny rehetra, mba hahafahany mitana andraikitra tsara kokoa. Betsaka ny olona mandinika ireo fepetra manokana ireo. Angamba tsy dia fantatro loatra ny momba ny sp ...
Fomba fanodinana ireo fitaovana milina CNC
1. Azo ampifanarahina Rehefa manamboatra workpiece vaovao amin'ny fitaovana milina CNC, ny fanodinana ilay workpiece vaovao dia tsy azo atao raha tsy amin'ny alàlan'ny famerenana indray ny programa fanodinana ilay sanganasa vaovao. Rehefa miasa ny masinina amin'ny fitaovana milina CNC, dia fitaovana tsotra fotsiny no ilaina, ary tsy ilaina ny manamboatra ...